iPhone bụ otu n'ime kasị n'ọtụtụ ebe na igwe na ụwa, e nwere otutu softwares na ndị ugbu a bịa ìhè na ike ga-eji iji chebe iPhone megide penetration. A bụ ndepụta nke top 10 iPhone nche ngwa. Apple emebeghị ka a raara onwe ya nye antivirus ngwa n'ihi na ọ bụla nke ya iDevice. Ma e nwere ndị ụfọdụ ihe na ọ bụla onye ọrụ nwere ike na-ewe iji na-ha ekwentị data ala. Dị ka enyere akpaka mkpọchi ekwentị na ana achi achi na ekwentị akpọchi mgbe ọ bụla a nkeji ole na ole. Depụtara n'okpuru bụ 10 iPhone nche ngwa na ike ga-eji na-amụba larịị nke nche nke gị iPhone.
1. Chọta m iPhone
Ọ bụ ụdị nke na ngwa na-bụ nnọọ free. Ọ bụ ihu ọma a ọrụ metụtara na iCloud. Nke a ngwa nwere ike ịbụ nke akwa aka gị na ihe omume na ekwentị a na ma furu efu ma ọ bụ zuru. Na nke a ngwa ị pụrụ
Ime ekwentị na-egosipụta ozi na ihuenyo
Mee ekwentị emit a ụda maka nkeji ma ọ bụ abụọ
Ọ nwekwara ike-eji ka ihichapụ data na iPhone remotely
Ọzọ dị ịtụnanya mma bụ na ị nwekwara ike iji ya maka ndị ọzọ iOS ngwaọrụ.
Nke a ngwa-efu $3.99 na ike ga-eji na iOS 4.0 na mgbe e mesịrị nsụgharị. Ya ihe dị ịtụnanya na ngwa na-na-jikọrọ iPhones igwefoto na mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ ga-ewe foto nke onye (coincidently onye ohi) onye na-ejide ya, ma ọ bụ ihe ọ bụla igwefoto nwere ike weghara. Nke a ngwa-enye gị a zuru ezu log nke ebe nke gị iPhone mgbe mgbe etiti oge.
3. Virus mgbochi
Nke a ngwa nwere ike zụta maka a mere ego nke $0.99. Ọ pụrụ nanị ga-eji na iPhones na-arụ ọrụ na iOS 4.0 ma ọ bụ elu. Ọ bụ ihe na mgbochi nje ngwa nwere ike iṅomi ụdị nile nke akwụkwọ gụnyere Mgbakwụnye na-abịa tinyere Gburu.
4. SplashID mma n'ihi iPhone
Ọ bụ a free ngwa na ike ga-eji na iOS4.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị nke ya. Ya isi ọrụ bụ inye a na-ajụ ebe iPhone ọrụ nwere ike na ntukwasi-obi edebe ha
Ọmụma banyere kaadị akwụmụgwọ
Ọmụma banyere akụkọ
Ndebanye aha Koodu
Nke a ngwa nwere ike zụta maka $17.99 na ọrụ naanị na iOS 6.0 ma ọ bụ ukwuu. Nke a ngwa bụ nnọọ yiri splashID. Niile nke data na-echekwara na 1Password Pro na-ezoro ezo tupu ha na-echekwara ma ọ bụ ezoro ezo. Ị nwere ike na-echekwa ezoro ezo data on Dropbox, a data naanị ike decrypted na nna gị ukwu paswọọdụ, otú ahụ ọbụna ma dobe igbe na-hacked na gị data ga-abụ nnọọ nchebe.
A ngwa bụ free ịzụta, ma LastPass adịchaghị ọrụ nwere ike ịbụ $ 1 kwa ọnwa. The data na-ezoro ezo na ndị ọrụ na kọmputa na-adịghị na sava a na-enye a oké uru ka ọrụ dị ka ọ pụtara na naanị ezoro ezo data aga dị ka data ngwugwu na esịmde LastPass sava.
iPhone ọrụ nwere ike ịzụta a ngwa maka $2.99, ọ na-arụ ọrụ iOS 4.0 ma ọ bụ karịa na-adịbeghị anya na nsụgharị. Nke a ngwa na-isi na-eji maka ichebe ọtụtụ ihe dị ka vidiyo, foto na ụdị nile nke akwụkwọ. Ọ na-eme otú ahụ n'okpuru zuru ezu ezi uche. Nke a bụ otú ọ na-arụ ọrụ, na oge na onye ọrụ na-amalite iji nweta anaghị data ha na-abịa ihu na ihu a adịgboroja ihuenyo, ma ọ bụrụ na gị ọsọ ọsọ na-ekwesịghị ịdị na paswọọdụ mgbe mmeghe a ngwa, ị ga-ejedebe mmeghe a dee ngwa kama. The faịlụ na e echebe nwere ike zigara n'elu Wi-Fi.
Nke a ngwa-efu ihe ọ bụla, a nwere ike ịbụ a dị nnọọ ịrịba ama na-akpata na-eduga ná ya ewu ewu n'etiti iPhone ọrụ. iOS3.0 na mgbe e mesịrị na nsụgharị ndị dakọtara na a ngwa. Ọ bụrụ na ị mkpa ijide n'aka na gị na nkwurịta okwu na ekwentị na-anọgide nzuzo a ngwa encrypts gị nkwurịta okwu na enyemaka nke 256-bit AES izo ya ezo. A ngwọta arụ ọrụ nke ọma na ma 3G, 4G na Wi-Fi netwọk.
A bụ ihe ọzọ nche na ngwa na-bụ nnọọ free. Ọ na-arụ ọrụ iOS 5 na mgbe e mesịrị nsụgharị. Nke a ngwa bụ ihu ọma a nchọgharị weebụ na emewokwa ka tụnyere ihe nchọgharị ndị ọzọ n'ihi ụfọdụ nkà dị ka URL nzacha ike. A na-egbochi ndị iPhone ọrụ si na-nsogbu n'obi obi weebụsaịtị. A ngwa bụ kenyere na-amata na ụlọ ọrụ si URL, na nsonaazụ ọchụchọ na-eji na-egosi nchebe ma na-eche ọnweghị nchedo weebụsaịtị.
10. Spam Njide E Jidere
Spam Njide E Jidere bụ a free iPhone ngwa na-arụ ọrụ nke ọma na iOS 4.2 na ya mgbe e mesịrị nsụgharị. Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-egbochi gị igbe akwụkwọ ozi dị si na-echechiela site spam Gburu. A ngwa bụ kenyere ịjụ onye ọ bụla na-eziga ha a mail zaa a dị mfe query mere na ngwa guzosi ike ziri ozi si amata. Nke a ngwa nwekwara ike-eji na-ndepụta nke ndị nwere ike izipu ị a mail na-enweghị ihe ọ bụla àmà nke ihe ha bụ.
> Resource> iPhone> Top 10 iPhone Security égwu Chebe Your iPhone